Baabuurkii Taliyaha qaybta Police-ka Gobolka Sool ee Puntland oo maanta soo gaadhay Laascaanood. | WWW.SOMALILAND.NO
Baabuurkii Taliyaha qaybta Police-ka Gobolka Sool ee Puntland oo maanta soo gaadhay Laascaanood.
Posted on Juunyo 14, 2008 by Weriye2
S/land.no Baabuurkii Taliyaha qaybta Police-ka Gobolka Sool ee Puntland oo maanta soo gaadhay Laascaanood. Waxaa maanta soo gaadhay magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool gaadhigii Taliyaha Qaybta Police-ka ee Gobolka Sool ee maamul Goboleedka Puntland ee Somalia gaadhigaas oo tan iyo intii maamulka Somaliland uu la wareegay gacan ku haynta Gobolka ku sugnaa magaalada Tukaraq.
Gaadhigan ayaa waxaa lasoo galay darawalkii watay iyo todoba askari oo kale waxaana ay ula soo galeen maamulka Somaliland ee haatan ku sugan magaalada Laascaanood iyagoo kasoo kicitimay magaalada Kukaraq ee ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Puntland gaadhigan oo ahaa nooca Soomaalidu utaqaan cabdi bilaha oo qori ku rakiban yahay.
Waxaa soo galbiyay gaadhiga Taliyaha qaybta ee Puntland masuuliyiinta Gobolka Sool oo ay horkacayeen Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Sool Maxamed faarax Indho Buur,Gudoomiyaha Degmada Laascaanood Canbaashe aw Daahir x. Xasan iyo Taliya cusub ee Qaybta Police-ka ee Gobolka Sool Cabdi Muuse iyagoo ku sugayay darafka barri ee ukoonaysa ciidamada Somalialnd.
Askartii saarnayd gaadhiga iyo gaadhigiiba ayaa waxaa la keenay saldhiga dhexe ee magaalada Laascaanood halkaas oo ay ilaa hadda ku sugan yihiin iyadoo gaadhigani aan la ogayn inay Dawladu lacagta u celin doonto raga lasoo baxsaday iyo in ay sitoos ah ula wareegi doonto.
Isku soo wada duuboo waxaa caado rasmi ah ka noqday lasoo baxsashada baabuurta dagaalka iyo waliba kuwa kale maamul Goboleedka Puntland iyadoo alaaba ay wadayaasha baabuurtaasi ay lasoo goostaan baabuurka ay darawalka ka yihiin ulana soo galaan maamulka Somaliland.
« “Shacabka Reer Somaliland Hadii Ay NA Maqlaayaan Waxaan Odhan Lahaa Anaga Noo Codeeya, Laakiin Taasi Wax Suurto Galaya Maaha” — Muuse biixi cabdi GUDOOMIYAHA UHWA EE MALAYSIA AYAA AGAB SPORTS GUDOONSIIYAY CIYAARTOWGA DEGMADA ALLAYBADAY »